Mudane Madoobe ?wefdiga waxaan kala arinsannay horumarinta waxbarashada, biyaha iyo maamulka? – Radio Daljir
Oktoobar 23, 2013 6:26 b 0
Kismaayo, October 23, 2013 – Madaxweynaha maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Maxamed Islaan (Madoobe) ayaa ka warbixiyey safarkii ay xubno ka tirsan midowga Yurub, midowga Afrika, Britian iyo IGAD ku tageen magaalada Kismaayo shalayto.
Axmed madoobe ayaa sheegay in safarkaas ahaa mid muhiimad wayn u leh maamulka KMG ah ee Jubba, isagoo xusay in ay isla soo qaadeen madaxda safarka ku tegay Kismaayo arrimo dhowr ah oo la xiriira horumarinta.
?arrimaha bini?adanimo iyo dib u soo kabashada gobolka ayaan ka arinsanay, taas ayaa ugu waynayd booqashadooda waxaan diirada saarnay waxbarashada iyo dhinaca biyaha.? Ayuu yiri madaxweyne Axmed madoobe.
Madaxweynaha Jubba waxaa kaloo uu shaaca ka qaaday in ay aad uga wada hadleen masuuliyiinta booqday Kismaayo, dhinacayda amaanka iyo sidii loo bariintaari lahaa horumar bulsho iyo mid maamul oo gobolka ka hana-qaada.